Maraykanka Oo Madxda Somaliya Uga Digay Fadqalalo Siyaasadeed – Heemaal News Network
Dowladda Mareykanka ayaa ka hadashay is marin waaga ka taagan doorashada dalka Soomaaliya ka dhaceysa, xili muddo xileedka dastuuriga ahaa uu ka dhammaaday Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka Ned Price oo shir jaraa’id u qabtay warbaahinta Caalamiga ayaa sheegay in Mareykanka uu ka walaacsan yahay hirgeli la’aanta heshiiskii 17-kii September 2020 laga gaaray doorashada dhaceysa oo weli khilaaf iyo is marin waa uu ka taagan yahay.
Afhayeen Ned Price ayaa Madaxda Soomaalida ka dalbaday inay si deg deg ah dib ugu bilaabaan wada-hadal, si loo xaliyo ismari-waaga taagan taagan, wuxuuna sheegay in doorasho is bar bar socda ay horseedi karto xasillooni darro.
“Waxaan ugu baaqaynaa madaxda Soomaalida in ay degdeg dib ugu bilaabaan wada hadalada, una xalliyaan ismari-waaga taagan, si dhaqsana loo gudagalo doorashada. Doorashooyin isdhinac socda, kuwa hal dhinac ah ama waqtiga diyaar garowga daba-dheeraanshaha maamul xilgaarsiin ah intuba waxay horseedi doonaan xasilloonidarro” ayuu yiri Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka.
Mareykanka ayaa horey Madaxda dowladda Federaalka iyo kuwa maamul Goboleedyada ugu baaqay inay isugu yimaadan shir deg deg ah, waxaana Farmaajo cadaadis lagu saaray qabashada shirkaas.
Muddo xileedka Madaxweynaha Soomaaliya ayaa dhammaaday, iyadoo aan wax heshiis laga gaarin doorashada, waxaana dhawaan lagu soo kala tegay Shir Madaxda ku yeesheen Magaalada Dhuusamareeb, kadib markii la isku mari waayay qodobada qaar.
Mareykanka Oo Shaaciyay Dowladda ka Dambeeysay Weerarkii Internet-ka.